Geetaachoo Asaffaa Eenyuu? Who is Getachew Assefa? Part II -
Katabii darbe irratti, waa’ee nama dhiiga ilmaan Oromoon harka isaa dhiqataa jiraataa as gahe kanaa eegaleen ture. Kutaa lammaffaan kunooti.
Geetaachoo Asaffaa bara wayyaaneen bosona turte booji’amaa waraana dargii qorachuun caasaa tikaa Kinfee Gabremediiniin hoogganamu keessa seene. Wayita sanatti waraana dargii akka malee dararuun odeeffannoo irraa fuudhaa ture. Booda keessa leenjii basaastummaa dabalataa argatee sadarkaa isaas ol guddifate.
Yeroo ammaa kanatti dhaabbata Tajaajila Tika Biyyoolessaa ( National Intelligence Security Service – INSS) hooggana. Dhaabbanni kun Bakka bu’oota (Agents), basaastota (informants) akkasumas waahillan (Corporate) adda addaa irraa odeeffannoo funaanuu, qindeessuu fi tarkaanfii fudhachuu irratti hojjeta. Biyya keessatti namoota miiliyoona saddeet ta’an irraa odeeffannoo ho’aa (Fresh information) argata jedhama. Qaamni odeeffannoo kennuuf miseensota paartii OPDO, TOPLF, ANDM, SNPDM, namoota amantii akkasumas namoota paartilee mormituu keessatti dhoksaan ijaaramanidha. Yeroo baay’ee karaa basaastota kanaa wayyaaneen mana amantii fi paartilee mormituu to’atti. Akka fakkeenyaatti Lidatuu Ayyaaloo fi Tolosaa Tasfaayee fudhachuun ni danda’ama. Baay’ina miseensota odeeffannoo kennaniif gaafa ilaallu namni tokko ummata biyyatti kudha tokko basaasa jechuudha.
Itti aanaan Geetaachoo Asaffaa nama Isaayyaas Waldagoorgis jedhamu yoo ta’u amma inni kaafamee nama Haderaa Abarraa jedhamuun bakka buufameera. Haderaa Abarraa bara Dargii basaasaa Dargii ta’ee wayyaaneef odeeffannoo dabarsuun injifannoo isaanii keessatti nama isaan gargaare waan ta’eef aangoon kun kennameef.
Geetachoo Asaffaa qajeelcha adda addaa of jalaa qaba. Isaanis:
Qajeelcha Tika Biyya keessaa: Kutaa kana nama Amaanu’eel Kiroos jedhamutu hooggana. Itti aanaan isaa Darriboo jedhama. Caasaan kun sochii biyya keessaa, dhimma nageenyaa, amantii, paartilee siyaasaa hunda irratti basaasa. Ragaa qindeessee tarkaanfii fudhachiisa. Naannoorratti namoota akka Girmaa Abarraa fi Atsibaa Giday waliin hojjeta.
Qajeelcha Bilbila Butuu: Waajjirri qajeelchaa kana Finfinnee naannoo Hoteela Gannat jedhamuutti argama. Ilmaan tigiraay bara dargii hojjettoota koodii fi Oppireetara raadiyoo turan qindeessuun bilbila namaa butanii odeeffannoo funaanu. Adaamaa, Dirree Dawaa, Baahir Daar fi Gondor keessattis waajjira qabu. Jarri kun Komputera namaa cabsuun, nama dirqisiisan password email fudhachuun yakka raawwatu.
3) Qajeelcha Tika Biyya alaa (Counter Intelligence): Gareen kun nama Geetaachoo Waldagoorgis jedhamuun hoogganama. Maqaaf basaasa biyya alaa haa jedhamu malee xiyyeeffannoon isaa ummata biyyattii fi mormitoota biyyoota ollaa jiran basaasuudha. Humna guddaa biyyoota akka Keeniyaa, Sudaan, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Jibuutii fi daangaa Ertiraatti bobbaasee qabsaa’ota adamsaa oola. Baajata guddaanis ni ramadamaaf. Iciitiin bobbaa waraana wayyaanee akka hin baane, odeeffannoon dhimma TPLF akka hin argamne kan eegu qaama kanadha. Daangaa irratti namoota akka Asgelee Gabresillaasee fi Li’uul jedhaman bobbaafachuun hojjeta.
Qajeelcha Leenjii Tikaa: Nama Taaddalee Gabremaariyaam jedhamuun hoogganama. Kotobee naannoo Yarar Hoteel jedhamuutti kan argamu yoo ta’u takkaatti nama 50-80 leenjisu. Taaddaleen Gabremaariyaam duraan barsiisaa Yunivarsiitii Baar Daar ture. Amma leenjii ogummaa tika wayyaanee isatu hooggana.
Qajeelcha Injinariingii: Hayyama dhukaatuu (Fanjii) kennuu dabalatee hojii kanaan walqabatan caasaa kanatu hooggana. Nama Ashabbir jedhamu kan sabaan Kibba ta’etu dursa. Qajeelcha tika wayyaanee keessaa kan Tigiree hin taane isa qofa.
Qajeelcha Eegumsaa (Ajjaabii): Duraan nama Xaahir jedhamu kan dhiigaan Oromoo ta’e dhalaa Baalee tu irra ture. Xaahir waggaa sadii dura summii nyaachifamee ajjeefame. Erga Xaahir ajjeefamee nama Mokonnin Adeet jedhamutu qajeelcha kana hooggana.
Qajeelcha Eegumsa Bobbaa: Caasaan kun nama Mokonnin Gabremaariyaam jedhamuun hoogganama. Eegumsa dirree xiyyaaraa, ajjaabii qondaaltotaa fi kan dinagdee irratti gaafatamaadha.
Hin xumurre. Itti fufa ….